दुःखद खबर : राजधानीमा अवतरण गर्न खोज्दा तुवाँलो को कारण विमान दुर्घटना ४१ को मृत्यु ! – OnlinePahar
दुःखद खबर : राजधानीमा अवतरण गर्न खोज्दा तुवाँलो को कारण विमान दुर्घटना ४१ को मृत्यु !
२८ माघ २०७७, बुधबार १३:५० Basanta Khanal	0 Comments	विमान दुर्घटना
दुःखद खबर : राजधानीमा अवतरण गर्न खोज्दा तुवाँलो को कारण गर्दा विमान दु’र्घटना ४१ को नि’धन फेरि अर्को ब’ज्रपात भर्खरै राजधानीमा अवतरण गर्दा गर्दै विमान दु’र्घटना। रुसको राजधानी मस्कोमा एक विमानमा आ’गला’गी हुँदा ४१ जनाको मृ’त्यु भएको छ मस्कोको शेरेमेत्यवो हवाई अड्डाबाट मरमास्क जाँदै गरेको एयरोफ्लोट कम्पनीको सुपरजे-१०० विमानमा आ’गला’गी भएको हो ।
← रु रु जलविद्युतको आइपीओ भर्ने अन्तिम दिन कहिले ? (हेर्नुहोस् )
नेप्सेमा नयाँ रेकर्ड मंगलबार सूचकको वृद्धिसँगै नयाँ उचाईमा, हाइड्रोपावरमा विशेष तेजी →